ဧကရာဇ် အာကီဟီတိုက ၎င်း၏ လက်ထက်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၌ စစ်ပွဲကင်းစင်ခဲ့သည့် အတွက် စိတ်သက်သာရာ ရမိသည? - Yangon Media Group
ဧကရာဇ် အာကီဟီတိုက ၎င်း၏ လက်ထက်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၌ စစ်ပွဲကင်းစင်ခဲ့သည့် အတွက် စိတ်သက်သာရာ ရမိသည?
တိုကျို ဒီဇင်ဘာ ၂၃
ပြီးခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင် သက်တော် (၈၅) နှစ်ပြည့်ခဲ့သည့် ဂျပန်ဧကရာဇ်ကြီး အာကီဟီတိုက ၎င်း၏နိုင်ငံ၌ စစ်ပွဲဖြစ် ပွားခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ ဟိုင်ဆေးခေတ် (၎င်း၏ ထီးနန်းစိုးစံမှု) အဆုံးသတ် တော့မည်ဖြစ်သည့်အတွက် စိတ်သက်သာရာရမိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်း၏မွေးနေ့ပွဲမတိုင်မီ တော်ဝင်နန်းတော်တွင်ကျင်းပသော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ သက် တော်ရှည်ဧကရာဇ်ကြီးက ”ဂျပန်မှာ စစ်ပွဲကင်းစင်ပြီး ဟိုင်ဆေးခေတ် ကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အထူးစိတ်သက်သာရာရမိပါတယ်” ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
၎င်း၏ ဖခမည်းတော် နာမည် ဖြင့် စစ်နွှဲခဲ့သည့် စစ်ပွဲအကြောင်းကိုလည်း ၎င်းက ”ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်းမှာဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့ မရေ မတွက်နိုင်တဲ့အသက်တွေကို မေ့မပစ်ဖို့ အရေးကြီးပြီး စစ်ပြီးခေတ် ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ သာယာဝပြောမှုဟာ ဂျပန်ပြည်သူတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ များပြားတဲ့ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုနဲ့ မရပ်မနား ကြိုးပမ်း မှုတွေအပေါ် အခြေတည်ဆောက် လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်” ဟု ပြောဆိုခဲ့ သည်။
စစ်ပွဲပြီးနောက် မွေးဖွားခဲ့သူများအနေနှင့်လည်း သမိုင်းကို တိကျမှန်ကန်စွာ သိရှိထားရန် လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်း အလေးပေး ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဧကရာဇ်ကြီးသည် လာမည့် ဧပြီ ၃ဝ ရက်တွင် ထီးနန်းစွန့်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ ချာဆန်သမန်ထီးနန်းကို အသက် (၅၉) နှစ်အရွယ် သားတော်ကြီး အိမ်ရှေ့စံ နာရူဟီတိုထံသို့ လွှဲပြောင်း ပေးမည်ဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်း ၂ဝဝ အတွင်း ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး ထီးနန်းစွန့်မှု ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် နိုင်ငံတော်သို့ ရှားရှားပါးပါး မိန့်ခွန်းတစ်ရပ်ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် ဧကရာဇ် အာကီဟီတိုကို အနားယူခွင့် ပြုမည့် အထူးဥပဒေတစ်ရပ်ကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ ထီးနန်းစွန့်အ ခမ်းအနားပြီးနောက် သီတင်းပတ် အနည်းငယ်အကြာတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၌ ခေတ်သစ်တစ်ခုအဖြစ် အမည် တပ်ခေါ်ဝေါ်သည့် ကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။
ပြင်သစ် Yellow Vest ဆန္ဒပြပွဲ ခြောက်ပတ်အတွင်းရောက်ရှိလာ၊ စုစုပေါင်းသေဆုံးရသူ ၁ဝ ဦးအထိ ရှိလာ
နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးတွင် ဒေသဆိုင်ရာ ငွေကြေးများ အသုံးပြုရန် မဲခေါင် အောက်ပိုင်းနိုင်ငံ စီးပ??